"Tsy misy olona manan-kery … ny amin’ny andro hahafatesana." Mpitoriteny 8:8
"Kristy Jesosy, Mpamonjy antsika… nahafoana ny herin’ny fahafatesana, ka ny filazantsara no nampisehoany mazava ny fiainana sy ny tsy fahalovana mandrakizay." 2 Timoty 1:10
Niondrika teo anoloan’ny fasana vao nandevenana ny rainyi Mamy, ary tsy niloa-bava. Avy eo izy dia nitodika tatỳ amiko ka niteny hoe: “Ho avy koa ny anjarantsika”. Vao maty volana vitsivitsy izay ny vadin’io namako io, ary izao fahoriana izao indray dia manamafy ny fanambaran’ny Soratra Masina hoe: “Tsy misy olona manan-kery … ny amin’ny andro hahafatesana”.
Ahoana ny fomba iandrasantsika izany hiafaran’ny fisiantsika eto an-tany izany ? Isika ve miezaka tsy hieritreritra io fotoana tsy maintsy hiavian’ny fahafatesana io, amin’ny fanariana dia, amin’ny fanararaotana ny fiainana? Ny tsirairay amintsika ve tsy tokony hametraka ny fanontaniana hoe: Vonona ve aho hihaona amin’Andriamanitra? Izaho ve efa nandray ny aina avy amin’Andriamanitra, dia ilay omen’i Jesosy? Noho ireo fahadisoantsika sy fahotantsika, dia mendrika ny fanamelohany isika, satria notendrena “ny olona ny ho faty indray mandeha, ary rehefa afaka izany, dia hisy ny fitsarana” (Hebreo 9:27). Fa hoy kosa Jesosy amintsika: “Izay mandre ny teniko ka mino Izay naniraka Ahy no manana fiainana mandrakizay ka tsy hohelohina ; fa tafafindra niala tamin’ny fahafatesana ho amin’ny fiainana izy” (Jaona 5:24).
Efa nekenao ve ny maha meloka anao eo anatrehan’Andriamanitra, sy ny hasarobidin’ny sorona nataon’i Jesosy teo amin’ny hazofijaliana ? Antomotra ny fotoana. Ho antsika tsirairay dia efa nanomboka ny fanisana mianòtra ny androntsika. Eny, ho avy tokoa ny anjarantsika.
Na izany aza anefa, ho antsika mpino dia tsy voatery hiafara amin’ny fahafatesana tsy akory ny fiainana eto an-tany. Isika dia miandry ny fiverenan’ny Tompo Jesosy, “Izay hanova ny tenan’ny fietren-tenantsika ka hitovy endrika amin’ny tenan’ny voninahiny” (Filipiana 3:21).